एमालेमा ओलीको चुनौती के छ ? गोकुल बास्कोटाले के भने ? - Sagarmatha TV
एमालेमा ओलीको चुनौती के छ ? गोकुल बास्कोटाले के भने ?
निर्विकल्प अध्यक्ष र सर्वसम्मतिबाट पदाधिकारी चयन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रयासमा धक्का लागेको छ । उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष पदमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेपछि उनको सर्वसम्मत अध्यक्ष वन्ने वाटोमा तगारो लागेको हो । तर,ओलीका चुनौती यति मात्र होइनन,अरु पनि छन । के-के छन त ?
मंसिर १० देखि १२ सम्म तय भएको नेकपामा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आउन संघारमै आइसक्दा सबैको ध्यान नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तिर केन्द्रित भएको छ । २०७६ फागुनमा तत्कालिन नेकपा विघटन भएको र गत भदौमा एमालेबाट माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम सहितका नेता कार्यकर्ता एमालेबाट बाहिरिए पछि एमाले कमजोर भयो भनेर एक थरिले बताइरहेका छन ।
तर ओलीले एमाले कमजोर भएको स्विकार्दैनन । बरु अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगाएतका नेता एमाले बाट बाहिरिदा पार्टी झन सुदृढीकरण भएको दाबि गर्दे आएका छन। यहि महाधिवेशन बाट अध्यक्ष ओलीले एकताको सन्देश दिने गरि सर्वसम्मतिमार्फत नेतत्वसहित पदाधिकारी चयनको चाहना राखेका छन। ओलीको यो चाहनालाई आइतबार उपाध्यक्ष भीम रावलले १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उठ्ने उद्घोष गर्दै चुनौति दिए ।
रावलको उमेद्वारी घोषणा पछि ओली निकट नेता मात्रै हैन १० बुदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका अष्टलक्ष्मी शाक्य लगाएतका नेताले पनि रावललको उम्मेद्वारी प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन । तर ओली स्वयमले भने भीम रावलको उम्मेद्वारीलाई चुनौति नठानी सुझावको रुपमा हेरेका छन् ।
तर स्वयम अध्यक्षको दावेदार रावलले भने अव पछि नहटने वताएका छन ।तर,एमाले कै कतिपय मानिसहरु उनलाइ वार्गेनिङको लागि अध्यक्ष उठछु भनेको ठान्दछन । महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने रावलले चुनाव जित्नु वा हार्नु अलग कुरा हो तर उनले सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष वन्ने योजनामा रहेका ओलीको अहंममा भने धक्का पुरयाएका छन ।
ओलीलाइ चुनौती दिन सक्नेनेताहरु माधव नेपालतिर लागिसकेका बेलामा रावलले उम्मेदवारी घोषणा गरेर सानोतिनो चुनौती खडा गरादिएका छन तर माधव पक्षबाट एमालेमै रहेका दस जना नेताविचमा एकमत नहुदा रावलको उम्मेदवारीलाइ ओलीलाइ गम्भीरतापुर्वक नलिएको वुझन सकिन्छ । तर,ओलीको लागि चुनौती रावल मात्र होइनन । चुनौती अरु पनि छन ।
एमालेमै रहेका रामबहादुर थापासहितका पूर्वमाओवादी नेताहरु अध्यक्ष ओलीसंग सहकार्य गरेर आफु पक्षका नेतालाइ धेरैभन्दा धेरै पद दिलाउने कोशिशमा छन । उनीहरुले एमालेको आगामी महाधिवेशनलाई एमालेको १० औं महाधिवेशन मात्र नभइ एकताको महाधिवेशन भनेका छन । तर पुर्वमाओवादीलाइ सम्मानजनक स्थान दिदा केपी ओली पक्षकै नेतालाइ कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने ओलीलाइ अर्को चुनौती छ ।
महाधिवेशन नजिकिए संगै एमाले भित्र दुई प्रश्न उठ्न थालेका छन । एक —एमालेकै असन्तुष्ट पक्षको भूमिका महाधिवेशनमा के होला ? र दुई, पूर्वमाओवादी नेताले एमालेमा कस्तो स्थान पाउँलान् ? यी दुई प्रश्नले उपयुक्त जवाफ खोजिरहँदा संस्थापनका रुपमा रहेको ओली पक्ष भने सुरक्षित देखिन्छ । किनकि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसलाई चाहन्छन्, उसैले आगामी महाधिवेशनमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म स्थान पाउने स्थिति निर्माण गरिएको छ । तर ओली निकट नेताले भने यसलाई स्विकार्दैनन । साथै उनीहरुले एमालेभित्र ओलीलाई कुनै चुनौति नभएको समेत दाबि गरेका छन ।
आगामी चुनावमा पहिलो दल बनर आउनु र सांगठानिक चुनौति बाहेक एमालेलाई कुनै चुनौति नरहेको एमाले नेताहरुको तर्क छ । तर कुरा यति मात्र होइन,एमाले भित्र रहेका पुर्वमाओवादी र माधव नेपाल छाडेर एमाले मै वसेका दस भाइ नेताको ब्यवस्थापन पनि ओलीको चुनौतीको विषय छ । अझ यो भन्दा पनि चुनौती के छ भने ओलीपछि एमालेको कमाण्ड सम्हाल्ने कसले ? भन्ने छ । अर्थात ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष कसलाइ वनाउनेछन,यो पनि हेर्नलायक विषय छ ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूको चाहना र दाबी पदाधिकारीमा छ  । रामबहादुर थापाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा, टोपबहादुर रायमाझीले उपाध्यक्ष, मणि थापा र लेखराज भट्टले सचिवमा मागदाबी गरेका छन् भने प्रभु शाह स्थायी समिति सदस्यको सुनिश्चिता खोजिरहेका छन् ।जसका लागि ओली तयार नभए फरक ढंगले सोच्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन। ओली पनि उनीहरुलाई उचित जिम्मेवारीदिन इच्छुक देखिन्छन । तर वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीमा ओली समुहभित्र पनि सुवासचन्द्र नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेलले चाहना व्यक्त गरेका कारण पूर्वमाओवादी नेतालाई चुनौती देखिन्छ ।
यस्तै महासचिव पदमा पनि सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णू पौडेल, शंखर पोखरेल, पृथ्वी शुब्बा गुरुङले इच्छा गरेका छन ।एमालेले विधान संशोधन गरेर १७ वटा पदाधिकारीमा पद सिर्जना गरेको छ तर एमाले करिव ३५ जना यी पदमा आकांक्षी रहेका छन । यिनको ब्यवस्थापना ओलीको अर्को चुनौतीका विषय हो । र,जसले एमाले स्थान पाउदैन वा उचित सम्मान महशुश गर्दैन उसको लागि माधव नेपालको दलको ढोका खुल्ला भएकोले पनि नेता कार्यकर्ता सुरक्षित गर्नुपर्ने तहमा ओली छन ।